Ungenza kanjani okokuqala okokuqala okwesibili ukuletha injabulo?
Emva kokuzalwa komntwana, ushintshile. Umzimba wakho nemicabango yakho sehluke - yebo, ngoba waba umama. Manje unemizuzu yonke, ucabanga futhi unakekele ingane yakho eyigugu. Izinkinga ezihlobene nosana zisusa sonke isikhathi sakho samahhala, futhi ngezinye izikhathi awunaso isikhathi sokuzibeka ngokwakho. Futhi ebusuku awucabangi ngokusondelana, kodwa ukuthi ngabe konke kuhambisane nomntwana, nokuthi ekugcineni ungathola kanjani ukulala ngokwanele. Kodwa isikhathi sidlulile, futhi sekuyisikhathi sokukhumbula ukuthi awunayo umama kuphela, kodwa futhi nomfazi onothando, futhi uyesaba ukubuyela ebuhlotsheni bobulili nomyeni wakho.
Ungenza kanjani okokuqala okokuqala okwesibili ukuletha injabulo? Nawa amanye amathiphu okuzokusiza ngalokhu.
Mema umyeni wakho ngosuku
Khumbula ukuthi kwakungakanani, ngaphambi kokuzalwa kwengane yakho eyigugu. Hlela i-candlelit dinner yothando. Uma ukhathele kakhulu, akudingeki upheke okuthile okukhethekile. Phuza iwayini elibomvu elomile - lokhu kuzokusiza uphumule. Zithengele wena izingubo zangaphansi ezintsha ze-sexy bese uzama okungenani ukukhohlwa ukuthi ungumama oncelisayo. Uzobona isimo sengqondo sothando sizovusa isifiso nesifiso sakho.
Zama ukuphumula kancane
Uma usuka ezinyaweni zakho ngokukhathala futhi amehlo akho ahlangene ndawonye, ​​ubulili buzobonakala bungadingekile futhi buyinkimbinkimbi, ukugcwaliseka okuncane komsebenzi womshado, ngakho-ke uzofuna ukuyiyeka. Ngakho zama ukuphumula phakathi nosuku. Uma kunokwenzeka, mema ugogo ukuba anakekele umntwana, futhi ungazinikela isikhathi sakho ngokwakho. Futhi kusihlwa, lapho ubeka umntwana embhedeni, uzoba namandla okuxhumana nomyeni wakho.
Khohlwa mayelana nezinkimbinkimbi
Ngemuva kokuzalwa, ingabe unganqikazi ukugxila nomyeni wakho? Ingabe udidekile ngamanothi atholakalayo esiswini noma esifubeni, amafomu azungezile? Ungabi yinkimbinkimbi! Indoda ikuthanda, njengangaphambili, futhi ngiyabonga kakhulu ngokumnika ingane. Kodwa uma kusenzima kuwe ukuba unqobe ukuhlazeka nokungahambi kahle, yenza uthando ekuqaleni uma izibani zivuliwe noma ngamakhandlela. Futhi khumbula ukuthi ukwehluleka okubonakalayo kungokwesikhashana futhi ngenxa yabo akufanele ulahlekelwe ukusondelana.
Isifuba sakho sithinta ukuthinta komyeni wakhe ngobumnene futhi unobisi. Uma kukuhlazisa, bese ubonisa ubisi noma ukondla umntwana ngaphambi kokuba uhambe nomyeni wakho ekamelweni.
Iya endlini yokugezela
Uma ungeke ukwazi ukuphumuza ngenxa yokuba khona kwezingane ezincane ekamelweni lokulala, yenza uthando egumbini lokuphumula, endlini yokugezela noma ekhishini, ukuguqulwa kwesimo esivamile esingajwayelekile kuzofaka izinzwa ezintsha, kuzongeza ukuhlukahluka. Ukusetha ngendlela efanele uzosiza izintandokazi zothando: ungakhohlwa ngamakhandlela, amafutha anamakha, ukudonsa ngokuhlanganyela, noma ukugeza, ukusikhipha umzimba. Futhi ukuthi imicabango yakho ngesikhathi esiseduzane iseduze nawe, hhayi ekamelweni lapho umntwana elele khona, sebenzisa umhlengikazi-umsakazo.
Imisipha yesitezi sezintambo, kuhlanganise nesiswini, ngokuyinhloko ibangele ukuqina kwesimo socansi kanye ne-orgasm. Ezinsukwini ezimbalwa emva kokuzalwa, ungaqala ukwenza ukuqeqeshwa kwe-Kegel futhi. Zihlanganisa ukushintsha ukungezwani nokuphumula kwemisipha yesitezi sezintambo. Lezi zivocavoti eziseduze zingenziwa izikhathi eziningana ngosuku kunoma yisiphi isimo.
Kungcono ukuthi wena ngokwakho ungakwazi ukulawula isimo. Kulesi simo, uzokwazi ukuyeka ukuxhumana uma uzizwa ubuhlungu noma ungakhululekile ngesikhathi sokusondelana. Ungakhathazeki, akukho lutho lokukhathazeka ngalo. Ngokwemvelo, ekuqaleni ngeke uthole injabulo enjalo njengangaphambili, ngoba ukuhlangana (uma kwenzeka) kuzozikhumbuza ngokwabo izinyanga ezimbalwa. Chaza lokhu kumuntu wakho futhi uzoba nomusa kakhulu. Uma unesigaba se-cearean, khetha ukuhamba okungazilimazi i-suture esiswini.
Uma uncelisa, okokuqala ungase ukhathazeke ngokumelela kwesifazane, ngakho-ke umyeni akufanele agxile kwi-caresses yokuqala. Izindlela ezikhethekile zingasiza ekuxazululeni inkinga: izithasiselo eziseduze - ama-gel kanye nama-creams.
Qaphela ukwelashwa kokubeletha
Uma wesaba ukuthi ukusondelana kungaqeda ukukhulelwa okwesibili, futhi ngenxa yalokhu uzama ukugwema ukuya ocansini nomyeni wakho, khona-ke kufanele uxoxisane nomjozi wezifo. Uzokutshela ukuthi yiluhlobo luni lokuvimbela ukubeletha lungcono kakhulu kuwe manje. Udokotela, ngokuthembela emiphumeleni yokuhlolwa futhi, mhlawumbe, ukuhlolwa okunye, kuzokukhetha ukwelashwa okuthembekile. Ungabe uthembele endleleni kagogo: ngenkathi ubeletha, ngeke ukhulelwe. Kuyinto nje inganekwane! Kuyimbonga kuye kaningi kukhona izingane-pogodki.
Ubuhlobo bobulili ku-pair ngayinye bwakhiwa ngabanye ngabanye. Futhi kufanele uqonde ukuthi imikhuba eqinile kule ndawo ayikho futhi ayikwazi ukuba khona. Ngakho-ke, nguwe kuphela nomyeni wakho onganquma ukuthi uzoqala nini ukuphila okuncane ngemva kokuzalwa kwengane yakho. Into ebaluleke kakhulu ukukhulumisana phakathi kwabashade nesifiso sokuya komunye nomunye emhlanganweni.
Udokotela wakho wezifo uzokutshela ukuthi umzimba wakho uphinde wabuyiselwa emva kokulethwa. Uma uhlolwa, udokotela uzohlola ukuthi izimpondo zangaphakathi ziphulukisiwe yini, kanye nezigxobo ezibhekene ne-perineum (ngemuva kokuphaka, izinyembezi noma i-episiotomy) noma esiswini (ngemuva kwesigaba se-caesarean). Kubalulekile ukuthi lesi sibeletho sibuyele esimweni esijwayelekile, njengoba kuboniswa ukuphela kokuphuma kwegazi. Ngokwesilinganiso, izifo zemizimba zincoma ukunciphisa kusuka ebuhlotsheni bobulili zingakapheli amasonto 6-8 emva kokulethwa kwemvelo. Kodwa umzimba wonke wesifazane ubuyiselwe ngendlela yawo, okusho ukuthi zonke lezi zibalo zihlobene. Futhi ngowesifazane kuphela okhetha ukuthi usekulungele isikhathi sesibili sokuqala noma cha.
Amangqamuzana emzimbeni womuntu, okushoyo
I-stall enobuhlungu: izimbangela, izimpawu
Ukunqamuka kwesikhashana kuyisici esingokwethenjelwa sokunciphisa izinga lokuphila
Izindlela zokwelapha i-myoma yezibeletho
Ukwelashwa ngokwendlela kaDudrin
Izindlela zendabuko zokwelashwa kwegazi elingelapheki i-lymphocytic leukemia
Zisize ngokwesikhatsi nesifo se-premenstrual syndrome
Izimbangela eziyinhloko zokuqothulwa ezinganeni
I-Cranberry-vanilla cocktail nge-ice orange
U-Anastasia Volochkova unamahloni we-Gucci fakes, isithombe
A ambalwa salads elula futhi okumnandi squid
Uhlelo lokuqeqeshwa lokuhamba ngezinyawo
Ungabeka kanjani izingubo nezingubo zangaphansi?
Indlela yokukhetha izicathulo zomntwana
Soy lecithin: ukwakheka, izindawo
Isinkwa sephunga ngokufafaza
Ungayenza kanjani ukuze abazali baqonde ukuthi wakhula?
Izifo zesisu nesisu
Ukuhlolwa kokuthuthukiswa kwengane eneminyaka eyodwa
Ngineminyaka engu-18 ubudala futhi angizange ngine isoka
Amagundane kubesifazane: ukukhetha okuhle
USobchak noVitorgan baqala ukugubha usuku lokuzalwa lendodana yakhe, ividiyo